Archive du 20171113
Dosien-dRavalomanana Nanjavona tao amin’ny fitsarana ?
Miparitaka amin’ny tambajotra ara-tsosialy (fb) nanomboka omaly alina ny resaka fahaverezan’ny dosie lehibe na “Grand dossier” mikasika an’i Marc Ravalomanana tao amin’ny tribonaly Anosy ny sabotsy 11 novambra.
Hery Rajaonarimampianina mivady Manao pi-maso amin’Antananarivo
Saika nanao fampivoriana maika ireo ray aman-drenin’ny mpianatra avokoa ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana ambaratonga faharoa teto Antananarivo ny sabotsy teo.
Fikambanana Tanora Mandray Andraikitra Fifidianana lalàmpanorenana no vahaolana
Naneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena teny amin’ny Espace Mon Gouter Andrefanambohijanary ny Fikambanana Tanora Mandray Andraikitra (TMA), tarihin’i Tsiry Andriamihantasoa ny sabotsy 11 novambra teo.
Fa iza, hono, no nitondra anao ? Mba iza koa ny ray sy reninao ? Fa vao lavitra dia tsy misy tsy mahalala anao. Fanta-poko, fanta-pirenena, tena izao tontolo izao.
Fanelezana tsaho Tena mampigadra
Anisan’ny raharaha mbola mitana ny sain’ny maro hatreto ny fisian’ilay tsaho niely momba ny vaksinina pesta izay tena nampisahotaka ray aman-drenin’ny mpianatra marobe tamina faritra maro, ny herinandro teo.
Minisitry ny serasera teo aloha Nohadihadiana teny amin’ny zandary
Notorian’ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Harry Laurent Rahajason teny amin’ny zandarimariam-pirenena ny minisitra, izay nodimbiasany Andrianjato Vonison.
Cybercafé Manao facebook sy mijery vaovao ny 80 %-n’ireo mpanjifany
Anisan’ny asa iray tena mandeha tokoa akehitriny, indrindra fa ny eto an-drenivohitra ny fanaovana cybercafé. Hatramin’ny nisian’ny facebook no voalaza fa tena nampandeha io asa fitadiavana iray io satria dia mampiditra hatrany amin’ny 50.000 Ar isan’andro raha kely ny cyber iray.
Fahitalavitra tsy miankina Mety hoesorina anaty “Canalsat” sy “Blueline” ary “Parabole”
Mety hoesorina ao anatin’ireo “bouquet” ao amin’ny Canalsat sy Blueline ary Parabole ireo fahitalavitra sy radio tsy miankina eto Madagasikara, raha ny siosion-dresaka re ny faran’ny herinandro teo.
Mahatsiaro ho tratry ny tsindrihazolena Nitroatra ny mpiasan’ny SAMVA
Vao tonga ny Tale Jenaraly vaovao dia tokony mba nampivory anay mpiasa aloha voalohany indrindra, mba nanontany hoe inona no zavatra tadiavinareo mpiasa sy ny zavatra tsy nety teto, hoy ireo mpiasan’ny SAMVA nanao fitokonana teny anoloan’ny Mikoja eny Ampasapito ny sabotsy 11 novambra teo.
Fiangonana FPVM Tohanan’ny fanjakana
Tontosa ny sabotsy 11 novambra lasa teo ny fitokanana ny trano Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara (FPVM), etsy Antaninanandrano Antaninandro, tarihin’ny Mpitandrina Randrianantoandro Jean Joseph.
Ligin’ny baolina kitra Analamanga Mbola ho kandidà indray i Tôta
Ny 1-19 novambra izao no daty navoakan’ny komity mpanomana ny fifidianana eo anivon’ny taranja baolina kitra Malagasy fa hanatanterahana ny fifidianan’ny seksiona manerana ny nosy amin’ny taom-pilalaovana ho avy.
Kianja Saint-Leu-la Foret Frantsa Voatazon’i Comores ady sahala ny Barea mpila ravinahitra
Azo ambara fa nahaliana ny mpijery baolina tany Frantsa, indrindra ireo mpila ravinahitra Kaomoriana sy Malagasy monina any amin’ity firenena ity ny nanaraka ny lalao ara-piralahiana « derby de l’Océan Indien »
Rallye RIM andiany faha-38 Mbola misy disadisa eo amin’ny vokatra ofisialy
Mbola misy disadisa ny vokatra ofisialy tamin’ilay fifaninanana rallye RIM andiany faha-38 nokarakarain’ny Fsam teto Antananarivo ny 10,11 ary 12 novambra teo izay nanome filaharana ankapobeny vonjimaika. Nahazo ny voalohany i Ndrianja-Fanja nitondra Subaru n°1.
Thb Champion’s League Malagasy Tompondaka 2017 indray ny CNaPS Sport
Tamin’ny isa 1-0 baolina matin’i Njiva tamin’ny alalan’ny penality teo amin’ny faha-31 minitra nilalaovana no nandresen’ny CNaPS Sport Itasy ny Elgeco Plus
« Tournoi allée des Baobabs » tany Morondava Resin’ny ASCB Boeny tamin’ny moka fohy ny SBBC Boeny
Azo avokoa ireo vokatra rehetra teo amin’ny taranja basikety notontosaina tao anatin’ny hetsika “Tournoi allée des Baobabs” notontosaina tany Morondava tamin’ny 4-11 novambra 2017.
Sao dia ho diso kajy e !
Mihamafana ny raharaham-pirenena ankehitriny, indrindra ny resaka paikady handresena any amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Raha mbola mifandresy lahatra sy mifandamina ireo vondrona politika tsy ao anaty fitondrana sy ny firaisamonim-pirenena dia manao tsy omby aloha amin’ny kajy maloto sy pitsopitsony handavoana ny mpifanandrina kosa ny HVM.
Ady amin’ny pesta ao Andoharanofotsy Mitety fokontany manentana ny mponina ny polisy kaominaly
Tsy amin’ny vanim-potoana fisian’ny valanaretina pesta tahaka izao ihany fa irina haharitra sy mandavan-taona mihitsy ny asa fanadiovan-tanana ho an’ny kaominina Andoharanofotsy Atsimondrano.
Festival Sambaraha –Tolagnaro Ho goavambe ny andiany faha-6
Hanakoako any Tolagnaro ny 20 ka hatramin’ny 23 desambra ho avy izao ny festival Sambaraha andiany faha-6 karakarain’ny Cosfa. Hetsika ara-kolontsaina goavana izy ity.
Faha-5 taonan’ny « VOX ANGELI » Hetsika maro no hotanterahina
Hanasongadina ny maha izy azy amin'izay ny antoko mpihira Vox Angeli ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Tsiahy an’i Michael Jackson Hipoka ny tranompokonolona Analakely
Feno hipoka ny tranompokonolona Analakely ny sabotsy hariva teo. Azo lazaina ho niavaka ary mbola nampisongadina hatrany ilay mpanjakan’ny Pop Music,
Trafika sy fanamboarana basy Afera tena mandeha eto Madagasikara
Ny 1 aogositra hatramin’ny 31 oktobra 2017 dia 47 isa no fitaovam-piadiana azo (basy lava sy basy fohy) misy ny basina zandary, miaramila,
Mbola ny mponina ihany no omen'ny fitondrana tsiny ho tsy nahay nihaino ny fanentanana sy ny serasera nataon izy ireo momba ny vaksinin'ny pesta, hoy ny tale jeneralin'ny minisiteran'ny fanabeazam-pirenena. Tsy tokony hiandry ny fanjakana foana ny rehetra manoloana ny zava-mitranga, raha ny fanazavany hatrany.